Astaamaha waxqabadka iyo mabda'a shaqada ee xajinta elektromagnetic ee qalabka mashiinka maaskaro. Xakamaynta elektromagnetic waa qalab wax soo saar muhiim ah ee mashiinka maaskaro. Qalab wanaagsan oo elektromagnetic ah ayaa hagaajin kara waxtarka shaqada ee mashiinka maaskaro iyo ...
Warshadaha saxan ee saxsani had iyo jeer waxay ahaayeen warshad xoog-xoog leh, caasimada-culus, iyo tiknoolajiyad-intarnet-adag. Warshaduhu waxay leeyihiin marin sare. Xitaa haddii shirkad guud aysan gaarin heer cayiman, way adkaan doontaa in faa'iido la soo saaro. Shirkadaha waaweyn way yareyn karaan kharashaadka ...
Waan ognahay in qalabaynta saxda ahi ay leedahay shuruudo sare oo sax ah, qalabaynta saxda ahi waxay leedahay qallafsanaan wanaagsan, saxsanaanta waxsoosaarka sare, iyo qalab dejin sax ah, sidaa darteed waxay ku shaqeyn kartaa qaybo leh shuruudaha saxda ah ee sarreeya Marka maxay yihiin qaybaha ku habboon mashiinnada saxda ah? Kuwa soo socda waa ...
Shirkaddayadu waxay si guul leh u soo saartay mashiinka maaskaro
Bishii Maarso 4-teedii, mashiinka maaskaro-ka-labo-labo ah oo si madax-bannaan oo ay soo saarto shirkaddayada ayaa si rasmi ah loo soo saaray, waxayna ku guuleysatay wax soo saar ballaaran. Mashiinka maaskaro ayaa laga heli doonaa iibinta Shiinaha iyo gobollada dibedda. Intaas waxaa sii dheer, waxaa sidoo kale jira tiro badan oo qaybo bar ah oo loogu talagalay mashiinka maaskaro, wh ...